UMatlou welulelwe inkontileka kwelaseSpain, akasabuyi kuleli
July 10, 2021 Impempe.com
Umdlali weBanyana Banyana, uNoko Motlou ngeke esabuya kuleli njengoba bekuke kwabikwa phambilini. Lokhu landela ukuthi iqembu lakhe laseSpain elidlala esigabeni esiphezulu ebholeni labesifazane kuleliya lizwe linqume ukumgcina omunye unyaka.
Abaphathi beSD Eibar, edlala kwiPrimera Iberdrola League belule inkontileka kaMatlou, oseneminyaka engu-35, ngonyaka owodwa okusho ukuthi uzohlala kuyo kuze kube ngu-2022.
Bekuke kwavela ukuthi uyabuya kuleli ngemuva kokuphela kwenkontileka yakhe. Bekubikwe ukuthi uzobuyela kwiFirst Touch Ladies kodwa abe-Eibar babuye bajika ukucabanga ngaye.
UMatlou wayojina leli qembu ngonyaka ka-2020 ephuma eqenjini langakubo eLimpopo ebelidlala kwiSasol League ngaleso sikhathi, iFirst Touch Ledies. Lo mdlali osedlale eqenjini lesizwe amahlandla angaphezu kuka-150 ungomunye wabadlali abahlonishwayo ebholeni labesifazane kuleli.
FUNDA NALA: UBilliat uveze uthando lokuhlala kwiChiefs aphelelwe yinkontileka kuyo
Ungomunye wasebedlale naseNdebeni yoMhlaba. Ungumdlali wokuqala wabesifazane owine umklomelo woMdlali oVelele kuleli. UMatlou usedlale imidlalo engu-18 isiyonke kusukela ngo-2020 kuleli qembu lakhe laseSpain.
Uphinde abe ngomunye wabadlali baseNingizimu Afrika abaphephezelisa ifulegi emazweni aphesheya kwezilwandle. Waqala ibhola engumgadli kanti manje usedlala emuva kanti uwenza kahle umsebenzi wokuvala.
Previous Previous post: Bakubeke eceleni okwenzeka ekhaya, bazidlalela ibhola abe-eSwatini
Next Next post: ISharks idlale kangcono, kodwa yayiphinda induku yeLions